နှာဗူးဂ ျီးဦးကြောင် နှင့် ရွာအူးစီးဒူးခေ ျာင် Buu and Do | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » နှာဗူးဂ ျီးဦးကြောင် နှင့် ရွာအူးစီးဒူးခေ ျာင် Buu and Do
နှာဗူးဂ ျီးဦးကြောင် နှင့် ရွာအူးစီးဒူးခေ ျာင် Buu and Do
အီးဟီးဟီး… ဟုတ်ပါတယ် ခညာ… အနော ်ကြောင်ကြီး အလွန်ဆိုးဝါးဒဲ့ သပ်တဝှာဂ ျီးပါ… အခေါ်အပြော မလှုပ်ကြပါနဲ့။ ပြောမိယင် မြွေကိုက်မယ်၊ ကင်းပေါက်မယ်… မြွေတောင် ရိုးရိုးမှုတ် မြွေစိမ်းမီးခြောက် ကိုက်မှာပါ၊ စကော ်ပီယံ ကင်းခြေမြှား အထိုးခံရမှာပါ။ ဝေးဝေးသာ ရှောင်ရှားဂ ျပါခမြှာ။ ကြောင်ယုဂ်မာဂ ျီးပါ ကြောင်ဗူးဂ ျီးပါ.. အဟင့် အဟင့်..။ မှန်ဗေသီ… ကြောင်ကြီးဒဂေါင် ရွာပြင်ထုတ်ခံရသောကြောင့် ဝမ်းပမ်းတနဲ အော ်ဟစ်ငိုကြွေးနေဂ ျင်း ဖြစ်သီ။ ရွာ၌ ဆော ်ဒီပျံ အူးမွတ်ခဲနှင့်နွတ်မမတို့၏သား မောင်အလီ ရှင်ပြုအလှူ အတွက် ထင်းခုတ်၊ ရေခပ်၊ အိမ်သာက ျင်းတူး အားပါးတရ ခိုင်းဂ ျပီးမှ အတင်းအဓမ္မ ရွာပြင်ထုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်၏။
မှန်ကန်လ ျင် ကွဲဓါတ်သီ ဆိုရိုးအတိုင်း ယခု ကြောင်ကြီး အဖဲ့ခံရလေပြီ။ မည်သူမ ျှ တားဆီးကန့်ကွက်ခြင်း အလ ျဉ်းမရှိ…။ မိမိနှင့် မစိုင်ဘိအလား ချက်တင်ကြူ လ ျက်ရှိသူ၊ ဖဘမွှေလ ျက်ရှိသူ၊ ဗိုင်ပါတော ့မပြတ်သူ အသီးသီး အသက အသက မ ျက်ကွယ် ပြုလေဗီ။ ညနေစောင်း ရေခပ်ဆင်းလ ျင် ထမီရေလ ျှားပင်မဝတ် ကြောင်ကြီးရှေ့ ဘီကီနီနှင့် တူးပိစ်နှင့် ရေခပ်ဆင်းပြသူ သမီးလေးအပေါင်းလည်း မကယ်နိုင်…။ ၎င်းပြုခဲ့သောကံ သူ့ထံပ ျံလာခြင်း ဗေတီး..။
ကြောင်ကြီး သီးခံပါ၏.. ခွင့်လွှတ်ပါအိ.. နားလည်ပါ၏။ ငါ့ကံဟု လာဘ်ခံပါ၏ … သို့သော ်လှေနစ်သူ ဝါးကူထိုး စဂါးပုံရှိရကား ထိုမ ျှနှင့်မပီး.. ရွာပြင် တံဂါးဝ အိပ်နေသော ကြောင်ကြီးအား ရွာသူားအပေါင်းမှ အဝံတခ ျီ အထွက်တခ ျီ ခလုပ်တိုက်သွားအိ။ အူးကြီးမိုက် ဆိုလ ျင် ခွါးမသေးဆိုကာ ပြေးကံအိ။ မားနိုဂ ျီးဂါး ခလုပ်တိုက်ပီး ပ ျံလှည့်ကြည့်ကာ ဘက်ကစ် ထပ်ပေးအိ။ အွတ် .. အွတ် …
ငိုလို့ဝဒေါ့ ဒေါသ ဖြစ်လာပြီ.. တင်းလာပြီ.. နောက်စုန်း မြိုသိပ်မထားနိုင်ဒေါ့…။ နောက်တနေ့နံနက် ဝေလီဝေလင်း အလီလေး ရှင်ပြုအလှူ မှ “အလာ A CAT ပါ” လော ်စပီကာ အသံကြောင့် နိုးထလာသော ကြောင်ကြီး လေညှာအရပ်ရှိ တောင်ဂမူပေါ်သို့ တက်ခါ ခံစားခ ျက်မ ျား ဖောက်ကွဲထွက်ဒေါ့သည်…. ။ ဟုတ်ပါတယ်ခမြာ ရွာပြင်ထုတ်တာ မှန်ပါတယ်။ ကောင်းဂ ျိုး မပေးတဲ့ ငကြောင်ကြီးပါ၊ ဟိုဒင်း ခိုနီဒုံဂ ျီး လူရည်ချွန်ဖြစ်၊ ဆလာဝံဖြစ်တာ အနော ်စပေါ့ရိုက်ပေးလို့ မှုတ်ပါဗူး.. အဲဒီခေတ်မှာ စပေါ့ မပေါ်သေးပါဗူး။ အူးမိုက်တာမီး ဆယ်ဒန်း အောဒီထွက်တာ အနော ်ဂိုက်လှုပ် မပေးရပါဗူ၊ သုဟာသူ ကြိုးစားလို့ပါ။ ပီးဒေါ့ လေမားမားနဲ့ လေရဲမိုး တဂ ျိတ်ထဲ တညံဒဲ မှုတ်ရပါဘူး၊ တခြားစီပါ။ တဖက်ပိတ် မဲသွပ်ဟာလဲ အဂု နှစ်ဖက်ပွင့်သွားပါပီ။ ခြိမ်းပုတီးမဆိုတာ လည်ပင်းက ပုတီးသံ တခေ ျာက်ခေ ျာက်နဲ့ နားထောင်ကောင်းလွမ်းလို့ပါ။ ဆနွမ်းမကင်း ရွှေကြည် သိပ်ကောင်းပါတယ်၊ ဆားကြည့်ဂ ျပါ။ ကွင်သဘုံအတု ဆိုတာ မရှိပါဘူး၊ နယ်ဂ ျား ခေ ျာင်လို့ သူ့ဟာသူ စောင့်တာပါ။ အူးမွပ်ခဲလည်း ကေ ျာင်းသား တကယ်မုုန်းပါပူး.. သူ့ဝမ်းပူဆာ မနေသာလို့ပါ၊ မ ဖက်လိုက် မိုက်ဖက်ပါတာပါ။ ခွစ်လေးကိုလဲ ဆားမခ ျဉ်ပါဗူး၊ ငန်ပါတယ်။ ကင်းကောင်ပြာဆိုတာ သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်ထဲက ပလပ်စတစ် အရိုးစုဂ ျီးပါ၊ ကေအိုင်အေ အူးမ ျိုးဆိုဒါလည်း ကားတံဆိပ် KIA ကီးယား ကို အလွယ်ပြောမိဒါပါ။ ရန်ကုန်မှာတောင် ကားပြခန်း ရှိနေပါပီ။ ကိုကိုတို့ မမတို့ အူးအူးဒို့ ဒေါ်ဒေါ်ဒို့ပဲ မှန်ပါတယ်…
တယားမ ျှတမှု တောင်းဆို အသနားခံနေဗုံ
မှန်လေးမှန် ဒွေပါ..ထိုသို့ကြောင်ကြီးအော ်လေ ရွာဒွင် မြက်နှာဖုံးအုပ် ဟံလှုပ်နေသူမ ျား နေမထိ ထိုမသာ ဖြစ်ကုန်လေအိ။ ရွာထဲဒွင်လဲ တရုတ်နိုင်ငံ ရှင်က ျန်းပြည်နယ်မှ ဝီဂါမ ျိုးနွယ်စုဂေါင်းဆောင် အယာတိုလာ ကြေးမုံဂ ျီး (ခ) အီတွမ့်ဗွမ် အပါအဝံ ဧည့်သည်ဒေါ်မ ျားစွာ ရောက်နေသဖြင့် မကြားသယောင် မသိက ျိုးကျွံ ပြု နေသော ်လည်း မွပ်ဂဇက်ရွာသူားအပေါင်းအတွက်မူ အလှူ အသံလွှင့် ဇာတ်ထုပ်ပမာ နားသောတ ဖြစ်လှပေသီ။
ထိုအခ ျိန်ဝယ် မထင်မှတ်သော ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်လာအိ။ ရွာသဂ ျီး အယာတိုလာ မာမွတ်ခိုင်မ်မှ ဗိုုဂဒေါ်သာဂူးအိ လာဘ်ထောက်ခြမှုနှင့် ဆယ်အိမ်ဂေါင်းcatပတိမ်မြွေကြီးကား၊ စစ်တပ်သဒင်းပေး ဖက်ဆစ်ဖြိုးဂ ျီး၊ စွမ်းအားရှင်ပီခ ျိုဂ ျီး၊ ရဲဇုတ်လ ျှာမြ တို့ဖြင့် ရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဖ ျက်သိမ်းကာ တအူးဒီး အာဏှာရှင်စနစ် ပြဌာန်းလိုက်သောကြောင့်တီး။ အရေးကြုံတော့ဟောင်ဖွာဟောင်ဖွာ လှုပ်တတ်သော လူမိုက်ခင်ဇော ်နှင့် မောင်းဝတ်တို့ လှံပြဖို့ဝေးဇွ.. ဖဘပင် တက်မလာခေ ျ။ ရွာဆိတ်များ သာဆိုးအိ၊ အိမ်တံခါး အလုံပိတ်ကာ ပါးစပ်အဝတ်စို့လ ျက် ဆိတ်ဖြင့် မေတ္တာပို့ခြင်း၊ သစ္စာပြု ခြင်းမ ျားတွင်တွင် ပြုဂ ျကုံအိ။ လူတွင်က ျယ် နှူ းဗာဂီခမြာ ပေါင်ကြားထဲမှပင် ခေါင်းမဖော ်နိုင်… ဝါသနှာပေကိုး..။ (အမူးလွံပီး ကိုယ့်ပေါင်ဂ ျားထဲ ခေါင်းစိုက်နေဂ ျင်းဖြစ်အိ)။ ကာလသားဂေါင်း အလွမ်းစက်နှင့် သဂ ျားတို့ကလူလည်.. အော ်ဒါရှိသီစိုကာ နွားလှည်းဖြင့် ရွာပြင် ဦးအောင် ထွက်သွားဂ ျလေပီ။
အရေးကြုံမှ ကြောင်ကြီး သတိရ တမ်းတကုံအိ၊ ဟုတ်ပါ့အေ ငါ့တားကြောင်ကြီး ရှိလ ျင် ခုလို မဖြစ်ဟု ဂ ျူ နိုလေးအား ဖက်၍ မားနိုမှ စိုအိ။ ဗန်းခ ျီဆြာ ပါပါခေါင်ကမူ သူ့သမီးအား နှုတ်မှယောင်၍ နန္ဒာကြောင်ဟု မှားခေါ်၏။ အူးမိုက်ကမူ သမီးလေး လူဆရာဝံ မလှုပ်နဲ့.. ကြောင်ဆေးကုတဲ့ တိတ်စံဆလာဝံ လှုပ်ကွဲ့ဟု လူရှေ့ဒွင်မှာကြားအိ။ ကေအိုင်အေ အူးမ ျိုးမှလည်း အိမ်ရှိတာမီးနှစ်ဦးအား ယောက် ျားဂေါင်း မောင်းမနှာယောက်ဟု ဘာမှန်းမသိသည့် စဂါးကို၎င်း၊ အမ်တယ်ဂ ျီးကလည်း ကြောင်ကြီးရေ ငါ့မှာ ၃ယောက်တောင်ကွ… မင်းဆိတ်ကြိုက ်ဖြစ်စေရပါမယ်.. အမြန်လာကယ်ပါဟု ရွာစည်းရိုးတိုင်တက် အော်အိ။
မရသည့်အစုန်း ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ ၆ မှ ဗိုလ်လုမ နှင့် ဒီကေဘီအေ ပက်ကညောဗိုလ် ကင်းကောင်ပြာတို့ နှစ်အူးအား ကြောင်ကြီးအကြိုက် မီနီစကပ်တို ဝတ်စေလ ျက် အုန်းပွဲ၊ ငှက်ပေ ျာပွဲဖြင့် ရွာကိုယ်စား အသနားခံ တောင်းပန် ပင့်ဆောင်ခိုင်းလေသီ။ ပြာသိုလမို့ အမ ျိုးသားရေးဆိတ် ပြင်းထန်နေသော ကြောင်ကြီးလည်း သဘုံမနှစ်ဦးအား တွေ့လ ျင် တွေ့ခြင်း မေးမြန်း မနေတော ့ပဲ ခွီးကနဲ့ ခုန်အုပ်ကာ ဘယ်ပ ျံ ညာပ ျံ tea like ပီးလ ျင် ခ ျပ်ဝတ်တန်ဆာမ ျားပင် မဝတ်ဆင်အားပဲ သဘာဝအတိုင်း ရွာထဲသို့ တဟုန်ထိုးပြေးကာ အာဏှာရှင် မာမွတ်ခိုင်မ်နှင့် သူ့လူမ ျားအား မာန်ဟုန်ပြင်းပြင်းဖြင့် ပြေးထိုးလ ျင် မွတ်ဂဇက်ရွာဂ ျီး တမဟုတ်ခြင်း ဒီမိုကရေစီ ပ ျံရလေဒါ့သီ။
ထိုအခါ အလဂါးရ တန်ဖိုးမထား စိုရိုးအတိုင်း မားနိုဂ ျီးက ဂ ျူ နိုလေးအား အိမ်ထဲဖွက်၍ ဝရန်တာမှ ငါ့မှောင်ကြောင်ကြီးဟု၎င်း၊ ပါပါခေါင်မှ နန္ဒာခေါင်လေးအဖေမှ ဂုံပြုပါသီဟု၎င်း၊ အူးက ျီးမိုက်မှ သာမီးရယ် တက်လာဘ်စနဲ့ လူဆေးကေ ျာင်းပဲ တက်ပါတော ့ဟု၎င်း၊ အမ်တယ်ဂ ျီးမှ ဝမတိ ဝမတိ တားဓါရှိဟု ဂါထာလိုလို တေးလိုလို ဟစ်ကြွေး၍၎င်း၊ ကေအိုင်အေ အူူမ ျိုးမှလည်း ဘီလူးစည်း လူစည်း ရှိသကွဲ့၊ လူနေရာလူ ကြောင်နေရာကြောင် မိုးဂ ျိုးတွေ ပစ်ကုန်မည်ဟု၎င်း ကြေးဈူ းကမ်းစဂါး အသီးသီး စိုဂ ျသီ။ အထည်ခ ျုပ်စက်ရုံ သူဌေး ခိုနီဒုံဂ ျီးကမူ ကြောင်ကြီးရယ် လိမ်မာပါတော့ငါ့စက်ရုံမှာ တနေ့ငါးရာနဲ့ ညစောင့်ကြွက်ခုတ် လာလှုပ်ပါဟု အနိမ့်စုန်းလုပ်အားခ အုပဒေကြမ်းပါသော သတင်းစာအား ခါးနောက်ထိုးလ ျက် အလှုပ်ကမ်းလှမ်းအိ။
အမြင်မှံရသွားသော ကြောင်ကြီးကလည်း ရွာလူဂ ျီးမ ျားအား အူးသုံးဂ ျိမ်ခြပီး အနော ့်အမှားကို တောင်ပန်းတဲ့အနေနဲ့ ရွာလူဂ ျီးမ ျားကို လာဘ်ဆောင်ပဏ္ဏာ စက်ပြစေ ပြောသီတွင် အူးမိုက်၊ အူးမ ျိုး၊ အူးမွပ်ခဲ ရွာလူဂ ျီး၃ဦး ၎င်းခေါ်ဆောင်ရာ လိုက်ပါသွားလေသီ။ တောင်ပေါ်သို့ ခေါ်သွားဂ ျင်းဖြစ်အိ… “မင်းဟာ မရောက်သေးဘူးလားကွ၊ အူးမိုက်ထံမှ အသံထွက်လာဂ ျင်းဖြစ်သီ။ ခုမှ အစပဲ ရှိပါသေးတယ် ခမြာ..။ အူးမိုက်ကား လ ျှာထွက်နေခြေပီ။ အူးမွတ်ခဲမှာ ဒူးလေးတကိုင်ကိုင်ဖြင့် ချွေးဒီးဒီးက ျလ ျက်… အူးမ ျို းကဒေါ့ သစ်ပင်ဖက်ထားရပီ။ ဆိတ်ရှိသော ်လည်း ဒူးမလိုက်နိုင်ပြီ။ နှာဗူးဟု ၎င်းတို့သမုတ်သော ကြောင်ကြီး ကမ်းခြေတွင် လမ်းလေ ျာက်သည့်အလား လေလေး တချွန်ချွန်ဖြင့်၊ ရံဖံရံခါ ခြေတပေါင်ဂ ျိုးပင် ခုန်ဆွခုန်ဆွ တက်ပြလိုက်သေးသီ။
ဒူးမခေ ျာင် ဦးကြောင် ဗူးဂေါင်မဟုတ်
မိုးလွန်မှ ထွန်ခ ျ၊ ကေ ျာပေါ်ရောက်မှ ဓါးပြမှန်း သိဂ ျလေပီ။” ကြောင်ကြီးရယ် ငါတို့မှားပါတယ်ကွာ၊ ဆက်မလေ ျာက်ပြစေနဲ့တော ့၊ လာဘ်ဆောင်လည်း မလိုခြင်တော ့ပါဗူး။ ဆားနဲ့ပဲ ဆားပြစေ။ ” သနားဓါတ်သော ကြောင်ကြီးလည်း “အေးဗ ျာ ဒါဆိုလည်း လာလမ်းအတိုင်း ပြန်ဆင်းဂ ျပေဒေါ့၊ အနော ်လိုက်မပို့ဒေါ့ဗူး..။ အိမ်ဒေါ့ အရောက်ပ ျံဂ ျနော ်လမ်းမှာ မိုးမခ ျုပ်စေနဲ့၊ တောကောင်ကြီးတွေ ရှိတယ်။ ” ဆိုကာ ပေ ျာက်ကွယ်သွားလ ျင် ရွာလူဂ ျီးလူဂေါင်းမ ျားလည်း ဒူးပွတ်လ ျက် လက်ခြင်းခ ျိတ်ကာ တုံခ ျိတုံခ ျိ ဆင်းနေခိုက် ခွီး၊ဂရား ကဲ့သို့ ခြသေ့င်္လိုလို က ျားလိုလို ဘာမှန်း မသဲကွဲသည့် အသံနက်ကြီး ထွက်ပေါ်လာရာ ပြေးလည်းမပြေးနိုင် သေဘေးလည်း ကြောက်သမို့ ဖြစ်ခ ျဉ်ရာဖြစ် မ ျက်လုံးစုံမှိတ်လ ျက် အဆင်းလမ်းအတိုင်း မြေကြီးပေါ်လှဲ၍ တောင်အောက် လှိမ့်ဆင်းသွားဂ ျ လေဒေါ့သီ။ ဤဒွင် ဇပ်လန်းပီးအိ……………..
အတော် ကို သနားဖို့ ကောင်းတဲ့ ပုံပြင်လေးပဲ။
သိရင် လှန် ပြ အဲ လှံပြရုံတင်မဟုတ် ချွတ်ပြတာပေါ့ရယ်။
ဒါးကို ဒါးအိမ်ထဲက ပြေါပါတယ်။
ခုဆို ကြောင်ကြောင်ကို အတင်းအဒမ စော်တကား တဲ့ သူတွေ အမြင်မှန်ရပြီး နောက်တကြိမ် စော်တကားဖို့ ကြိုးစားနေလောက်ပြီ။
စော်ကားရုံတင်မကဝူး ပီးရင် သတ်ပါစားမာဒဲ့
ခီညားလုပ်လို့ ကျုပ်ကို ကေအိုင်အေသူလျှိဆိုပြီး စရဖက စောင့်ကြည့်နေပြီ
တစ်ခုခုဆိုလို့ကတော့ ခီညားကို အစိမ်းလိုက်ကင် ဝီစကီနဲ့မြည်းပစ်မယ်
သို့ငြားလဲ ကြောင် ဘာသာ စကား နဲ့ ရေးထားတာ ကို တော်တော် အချိန်ယူ ဘာသာ ပြန် ဖတ်လိုက်ရတယ် း)
အားလုံးကို ပြု စား ထားတယ် ..
တော်တော် နံတဲ့ ကကျောင် …
တော်တော်လည်ပြီး တော်တော်အခွက်ပြောင်တဲ့ကြောင် ကြောင်နုံ ကြောင်အ ကြောင်လဒ
ကာလသားဂေါင်း အလွမ်းစက်နှင့် သဂ ျားတို့ကလူလည်.. အော ်ဒါရှိသီစိုကာ နွားလှည်းဖြင့် ရွာပြင် ဦးအောင် ထွက်သွားဂ ျလေပီ။….တဲ့…
အနော်တို့… အဲ့နေ့က ဘယ်လိုဘယ်လို အော်ဒါ ရသွားပါလိမ့်…
ရီရစေတဲ့ အပြာစာတွေ ရေးပါလား…
ရီလည်း ရီရ… ရင်သိမ့်သိမ့်လည်းတုန်စေတဲ့ စာတွေပေါ့…
စာအုပ်အပါးလေးတွေအဖြစ် ရေးထုတ်ပေးလေ… ရောင်းကောင်းဖို့ အနော့်တာဝန်ထား ။
မပါဒါဘဲ မပါဒဲ့အတိုင်​းထားပါလား ဘ​လောက်​ခြစ်​သလဲစို ​နောက်​တ​ခေါက်​ပျံထဲ့​ယေးရဒယ်​ ခိခိ
ကြောင်ဇုတ် ကြောင်ဏှာ… သွသူ ကြောင်စမာန်ထတာ…
တရွာလုံးလည်းမနေရ ကျောက်စ်တမိသားစုလုံးလည်း ဟာဂျီဖြစ်ပြီ…
ကြောင်ဏှာဂျီးကို ခြေငြိမ်အောင် မဂျီးစန်းလက် အပ်မှပဲ… အာဟိ
တခါလေး ရှဲမိပါတယ် နာမည်အသစ်ကို ရရော။ :e:
တစ်ရွာလုံးကို ဗြောင်းဆန်အောင် မွှေနိုင်တာ ဒီကြောင်တစ်ကောင်ပဲရှိတယ်။
သူ့ကျကြည့်ပါလား.. ခလူးခွီးခွားနေတာ.. ရပ်ကွက်တခုခြားကတောင်..ကြားရ..။
မီနီစကတ်တိုဝတ်ပြီး ဦးကြောင်ကို အုန်းပွဲငှက်ပျောပွဲနဲ့ ကြိုရမှာပေါ့…။ အုန်းသီးအစား ဗုံးသီးအလုံးလှလှလေး ထည့်ပေးမယ်…
မရသည့်အစုန်း ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ ၆ မှ ဗိုလ်လုမ နှင့် ဒီကေဘီအေ ပက်ကညောဗိုလ် ကင်းကောင်ပြာတို့ နှစ်အူးအား ကြောင်ကြီးအကြိုက် မီနီစကပ်တို ဝတ်စေလ ျက် အုန်းပွဲ၊ ငှက်ပေ ျာပွဲဖြင့် ရွာကိုယ်စား အသနားခံ တောင်းပန် ပင့်ဆောင်ခိုင်းလေသီ
လုလုတို့များတော့.. သူ့ မီနီစကပ်ဝတ်ခိုင်းမှပဲ.. ပေါ်တော်မူလာတော့တယ်..။
လော ်ဘီမြ ဘယ်နှယ်လှုပ် ကြံသွားဒယ် မသိ။ နှာသကွာ…… ။ ကီးဘုတ်က ဘိုဖြစ်နေလဲမသိ ရေးလိုက် ဘက်စပေ့ငြိပီး ပ ျက်သွားလိုက်နဲ့ ကြံခဲ့ဗုံရဒယ်။
တော်စမ်းပါ မောင်မောင်ကြွပ် ရယ်။
နီ က နာ့ကို အညင်ကပ်လို့ တမင် ချန်ပြီး ရွာပြင် ထုတ် ထားတာကိုများ။
အခုမှ ကီးဘုတ်ကပ်သလေး ဘာလေး နဲ့။
နာ့မှာတော့ နာ့နာမည်မပါလို့ ဝမ်းနည်းလိုက်ရတာ။
နာမည်မပါလို့ တစ်ညလုံး ဝမ်းနည်းပြီး
“ငိုလို့ဝဒေါ့ ဒေါသ ဖြစ်လာပြီ.. တင်းလာပြီ.. နောက်စုန်း မြိုသိပ်မထားနိုင်ဒေါ့…”
ဟေ့ကောင် မောင်မောင်ကြွပ် ဆိုတဲ့ အကောင် ငါမင်းရှိတဲ့ နွားရူးရောက် ကို ကားနဲ့မကြာခင် လာခဲ့မယ် မင်းထွက်မပြေးနဲ့ ။။
ပြောပြီးမှ သတ္တိတော့ရှိရမှာပေါ့ကွာ ။အဲ ့ကောင် နွားရူးမြို့ ဘယ်နားမှာနေတယ်ဆိုတာ သိတဲ့လူပြောစမ်းပါ ။
ထမင်းသာဝအောင်စားထားပေတော့ ။ ငါကဗမာစစ်စစ်ကွ မင်းလိုကုလားမဟုတ်ဘူး ။ မင်းစောင့်နေ ။
အချိန်မရလို့ ဖဘ လရွှင်ဒေါ် ကြီး ထံမှ ကော်ပီ ပွါးသည်။
အဘလ ခွေးလွှတ်ပါ။ (မောင်မောင်ကြွပ် ဆီသို့)